Ubomi be-Ecamm: Kufuneka ubeneSoftware kuyo yonke i-Streamer ebukhoma | Martech Zone
Ndabelane ngendlela endidibanise ngayo eyam ofisi yasekhaya yokusasaza ngqo kunye nepodcasting. Iposi lalinolwazi oluneenkcukacha ngezixhobo zekhompyutha endizihlanganisileyo… kwidesika emileyo, mic, ngengalo yomatshini, izixhobo zomsindo, njl.
Kungekudala emva koko, ndandithetha nomhlobo wam olungileyo uJack Klemeyer, a Umqeqeshi oqinisekisiweyo kaJohn Maxwell kwaye uJack undixelele ukuba ndifuna ukongeza Ubomi be-Ecamm Kwisixhobo sam sesixhobo sezixhobo ukuthatha ukusasaza kwam bukhoma inotshi. Isoftware iyakhazimla ngokwenyani, ikwenza ukuba wenze ikhamera ebonakalayo kwinkqubo yakho apho unokuba nenani lezincedisi zokusasaza ngqo.
Ngaphakathi eofisini yam, ndiyakwazi ukutshintsha igalelo lokumamela, ukutshintsha igalelo lekhamera, ukuhlengahlengisa igalelo lam levidiyo, ukongeza iidesktops okanye iifestile, ukongeza ukugqunywa kombhalo, ukurekhoda kwasekhaya, okanye nokushicilela ngqo kwi-Facebook, kwi-LinkedIn, kwiTwitch, kwiYouTube, kwiRestream.io , kunye nabanye. Iqonga elinamandla ngokumangalisayo ongenakuphila ngaphandle kwalo ukuba ufuna iaudiyo nevidiyo enkulu.
Idemo ebukhoma ye-Ecamm
Nantsi imbonakalo entle yevidiyo evela Ubomi be-Ecamm abantu ngokwabo…
Iimpawu eziBukhoma ze-Ecamm zibandakanya
Igalelo leKhamera -Sasaza kwaye utshintshe iimbono kumgangatho we-HD usebenzisa nayiphi na ikhamera edityanisiweyo ye-USB, ikhamera yeLaptop, iDSLR, okanye ikhamera engenasipili.
Igalelo leVidiyo -Sasaza izixhobo zokubamba i-Blackmagic HDMI, i-iPhone, kunye nokwabelana kwescreen seMac.
Igalelo lomsindo -Sebenzisa nayiphi na imakrofoni edibeneyo ukubonelela ngesandi.
Inkxaso ye4K -Rekhoda kwaye usasaze ngekristale ecacileyo i-1440p kunye ne-4K.
IWindows Screen -Tshintsha imvelaphi yakho kunye nenqanaba lomgangatho wesikrini esiluhlaza.
Ukugqithisa - yongeza isicatshulwa, ukubala ukubala, amagqabaza ababukeli, isithathu esisezantsi, kunye nemizobo enjenge logo yenkampani kwi-livestream yakho.
Ukubek'esweni okwenyani -Kubeka esweni usasazo lwakho kumboniso odityanisiweyo.
Imiboniso egciniweyo -Ungabhala imiboniso kwangaphambili, ugqibe ngezihloko ezikusikrini kunye nokwahlulahlula izikrini. Oku kuye kwandinceda, apho ndinokuba nemiboniso nganye yamashishini am.
Ukwabelana ngesikrini Ukusasaza iintetho zakho, izifundo kunye nedemo ngonqakrazo olunye. Khetha ukwabelana ngesikrini sakho sonke, okanye i-app ethile okanye iwindow. Yongeza bukhoma umfanekiso kusasazo lokuchukumisa ubuqu.
Umdibaniso weSkype - yenza udliwanondlebe olulula lokwahlula-hlula usebenzisa umnxeba wevidiyo weSkype, kwaye uya kubona iindwendwe zakho zibonisa njengemithombo yekhamera kwi-Ecamm Live.
Phinda ujonge - Umdibaniso ne-Restream.io kunye ne-switchchboard ebukhoma kuthetha ukusasazwa bukhoma kumaqonga amaninzi ngaxeshanye kulula njengokucofa nje okukodwa. Kwaye ngenkxaso eyakhelweyo yokuhlanganiswa kwengxoxo yeRestream, i-Ecamm Live inokubonisa izimvo zencoko ezivela kumaqonga angaphezu kwama-20.
Dlala iVidiyo -Sasaza ifayile yevidiyo ngentshayelelo kunye namacandelo abhalwe kwangaphambili.
Nanku umbono wedesktop yam ngazo zonke izinto ezinokubakho:
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kum kukuba i-Ecamm Live inolawulo olungamangalisayo ukuze ndikwazi ukulungelelanisa eyam I-Logitech ye-BRIO Ukusondela kwekhamera yewebhu kunye nepan, ukukhanya, ubushushu, ukubala, ukugcwala kunye nokucoca i-gamma.
Qalisa SIMAHLA nge-Ecamm Live
Ukubhengezwa: Ndililungu le Ubomi be-Ecamm kunye neAmazon kwaye ndibandakanya ezo makhonkco kule post!
tags: isitshixo sokuhambisa isikofacebook bukhomaUkusasaza ngqo kwi-FacebookUkusasazwa kwe-Facebookukusasaza bukhoma kwi-intanethiUkusasazwa kwe-LinkedinhlaliswaI-logitech brioezantsi kwisithathukhala kwakhonaPheleleyo.ioumchachazoisoftware yokuhambisaswitchboard bukhomaukudidekaukujija ukusasaza ngqoukujija ukushukumaukuhanjiswa kwevidiyoisoftware yokusasaza ividiyoUkusasaza ngqo kwiYouTubeUkusasazwa kweYouTube